Al Shabaab iyo kooxo kale oo ka tirsan muqaawamada la dagaalanta ciidamada Itoobiyo iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ka sii go'aya Isbahaysiga lagu aasaasay Asmara iyo xildhibaanno ka tirsan BF oo isku diyaarinaya in ay ridaan xukuumadda Cusub. Ruunkinet 08/01/07
Warar lagu kalsoonyahay ayaa ku waramaya in ay soo baxeen kooxo kale oo la dagaalama ciidamda Itoobiya ee gacanta ciidan siiya kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo si weyn uga soo horjeeda Isbahaysiga lagu soo dhisay Asmara ee uu madaxa u yahay Sheekh Shariif.
Kooxda Al Casaam oo uu madaxa u yahay Sheekh lagu magacaabo Abu Zubeyr ayaa la sheegay in ay cambaareeyeen isbahaysiga Casmara ayagoo ku tilmaamay inay yihiin Khaa'imiin ka weecday diintooda.
Sheekh Shariif oo ahaa nin magac weyn ku lahaa shacabka Soomaalida dhexdooda intii uu xukumayay maxaakiimta Ismaamiyiinta ee nabadda ku soo celisay magaalada Muqdisho muddo dhan 6 bilood ayaa haatan u muuqda mid ay dad badan ka hor'imaanayaan siyaasadiisa kadib markii loo arkay in uu talo qaldan ka qaatay shaqsiyaad ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee ka qeyb galay shirkii Asmara ee lagu asaasay isbahaysiga.
Dhanka kale, wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in qaar ka tirsan xildhaanada dowladda federaalka ah ay wadaan ol ole ay ku doonayaan in lagu rido xukuumadda cusub ee uu dhawaan magacaabay ra'isul wasaare Nuur Cadde.
Warka ayaa intaasi ku daraya in xildhibaanno tiradooda lagu sheegay in ay ka badan yihiin 60 xubnood ay ku kulmeen Hotel Bekin oo ku yaal magaalada Baydhabo ayagoo ka hadlay sidii loo ridi lahaa xukuumadda cusub marka la horkeeno baarlamaanka.
Ra'isul wasaare Nuur Cadde ayaa la filayaa in uu xukuumaddiisa hor keeni doono golaha baarlamaanka 24 saac ee soo socota.
C. Cali, Ruunkinet, London